Ogaden News Agency (ONA) – Jawaabtii ay JWXO Ka Bixisay Hadaladii Foosha Xumaa ee Cabdiweli Gaas uu Kaga Hadlay Adisababa
Jawaabtii ay JWXO Ka Bixisay Hadaladii Foosha Xumaa ee Cabdiweli Gaas uu Kaga Hadlay Adisababa
Posted by ONA Admin	/ August 29, 2014
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ayaa war-saxaafdeed kasoo saartay hadalo uu maalin dhaweyd ka sheegay Cabdiweli Gaas TV-ga Itobiya isagoo jooga Adisababa. War-saxafadeedka ay JWXO soo saartay ayay si dagan uga hadashay taariikhda Cabdiweli iyo siyaabaha ay Itobiya u adeegsanayso oo ah inay ku burburiso dib usoo celintii Qaranimadii Dawladda Somaliyeed isagoo horey ay Itobiya ugu diyaarisay inuu doorkaa ka qaato. JWXO ayaa war-saxafadeedka ku bilowday;
Cabdiweli Gaas oo ahaa R/wasaarihii hore ee Somaliya hadana xukuma gobolka Puntland oo dhawaan tagay Itobiya ayaa ku andacooday inuusan aqoonsanayn Xukuumadda Federaalka Somaliya, isagoo taageero ka doontay maamulka Itobiya oon ogsoonahay inay dhiirigaliso qaswadi kasta sida Cabdiweli say u carqaladeeyaan dadaalka loogu jiro dibu dhiska Jamhauuriyadii Soomaliyeed. Cabdiweli intuu tagi lahaa Muqadishu oo dhibaatada uu ka tabanayo kala hadli lahaa xalinteeda Madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka Somaliya ayuu wuxuu ku cararay cadawgii soo jireenka ahaa ee umadda iyo qaranimada Somaliyeed say uga taageerto in Dawladda Dhexe aanay awoodeeda gaadhsiinin dalka. Arintaasi waxay muujinaysaa garaad-xumadiisa iyo inuu yahay camiil u shaqeeya Itobiya.
Waxay JWXO ku sheegeen war-saxafadeedka inuu Cabdiweli sanooyin ku noolaa Adisababa isagoo sheeganay inuu wax ka dhigo kuliyadaha dalkaa, hasa ahaatee loo diyaarinayay inuu jago madaxtinimo ka qabto Somaliya si istraatiijiyada Itobiya uga fuliyo.
Maadaama ay bulshada dawliga ay hadda usoo jeedsadeen in shacabka Somaliyeed laga cawiyo dibu dhiska dawladnimadoodii iyo xukuumad iyo baarlamaan taabagal ah, waxaa soo afjarmaya waqtigii Dagaal-oogayaasha iyo gobol beeleedyada. Sidaa daraaded ayay Itobiya oo ah kuwii soo barbaariyay Cabdiweli ku dhiirigaliyeen inuu ku dhawaaqo inuu kala noqday kalsoonida Xukuumadda Federaalka Somaliya intaanu u soo ambabixin Adisababa.
Carqaladaynta dawladnimada Somaliya kuma ekaanine waxay Itobiya ka dalbatay inuu ku dhawaaqo inuu ka taageerayo Itobiya ka hortagga JWXO dagaal hubaysanee gobanimadoon ee gumaysiga Itobiya ay kula jirto. Waxaase hubaal ah in balan-qaadkiisa inuu Itobiya ka caawinayo ka hirtaga JWXO aanu waxba kusoo kordhin doonin, maadaama aanu awoodin inuu hakiyo geedi socdka halganka shacabka Somalida Ogadenya ay ugu jiraan xoriyadooda. Wuxuu muujiyay oo kali awood darida Itobiya iyo inay ka doonatay taageero ashqaastan aan qiimaha lahaynoo kale.
Ugu horeyn wuxuu ku sifoobay Cabdiweli Gaas inuu yahay dagaal-ooge liita, maadaama uu ku daleeceeyay meel fagaara ah dawladiisii iyo baarlamaankiisi. Marka labaad, waxaa dhab ah inuu isaga un is-fadeexadeeyay maadaama habayaraatee aanay jirin wax uu ka qaban karo ONLF. Marka saddexaad, maadaama uu noqday dagaal-ooge soo baxay, wuxuu u digay un shacabka Somaliyeed oo taariikhda u galin doonta wuxuu yahay.
Cadawtnimadaa uu u muujiyay shacabka S.Ogadenya darteed, waxay ONLF wargalinaysaa dadweynaha Somaliyeed ee Ogadenya inay ka feejignaadaan imaatinka gobolkiisa. Waxay sidoo kale ONLF ugu baaqaysaa dhamaan dadka Somaliyeed ee damiirkoodu nool yahay inay cambaareeyaan dhaqan xumada Cabdiweli Gaas ee magac dilka ku ah umadda Somaliyeed isagoo dhaafsanaya waxaan qiimi lahayn inuu kaga helo Itobiya.
Ugu dambayntii, ONLF waxay cadanaysaa in aanay colaad u haynin umadda Somaliyeed gobol iyo hayb toona, oo taageerayso siday u heli lahaayeen xasilooni, nabadgalyo, dimoqraadiyad iyo Qaran Somaliyeed oo madaxbanaan.
Aug. 28 – 2014.
Akhri Nuqulka Rasmiga ah.